स्थानान्तरणको पैसा लिएनन्- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
स्थानान्तरणको पैसा लिएनन्
असुरक्षित क्षेत्र घोषण गरिए पनि थाकथलो छाड्न इन्कार
रामेछाप — भूकम्पले चिरा परेको जमिन र पहिरो जाने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न स्थानीय तहका १५० जनाले सुरक्षित स्थान सर्ने जग्गा खरिदका लागि प्राप्त रकम आधाभन्दा बढी त्यसै थन्किएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट गएका भूगर्भविदको प्रतिवेदनले यकिन गरेर घरबास सार्न लागिएको हो । तर पीडितहरू भने पुख्र्यौली थलो सर्न मानिरहेका छैनन् । उनीहरूले सुरक्षित स्थान खोजेर जग्गा किन्नेमा आनाकानी गरेकाले रकम जिल्लामै थन्किएको छ । प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) रामेछाप प्रमुख कृष्ण पियाले हालसम्म विभिन्न तहका ७७ जनाले मात्र सुरक्षित स्थानमा जग्गा किनेबमोजिमको रकम बुझेका छन् ।
जग्गा खरिदबापत् उपलब्ध गराइने २ लाख रुपैयाँ अनुदान नभई जग्गा बिक्रेतालाई दिइने नियमावलीका कारण पनि केहीले पैसा नबुझेका हुन् । अनुदान उपलव्ध गराउँदा सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद हुने नहुने शंका गर्दै प्राविधिकले उचित ठानेको र जनप्रतिनिधिले सिफारिस गरेको स्थानमा मात्र किन्न बाध्यकारी नियम बनाएको छ । ‘अनुदान पाउने भए सबैले पैसा लान्थे यो त जग्गै किनेर त्यसै स्थानमा घर बनाउनुपर्ने नियमका कारण धेरैले किन्न चाहिरहेका छैनन्,’ इकाईका दामोदर घिमिरेले बताए ।
इकाईले दिएको जानकारीअनुसार जग्गाको रकम नबुझ्नेमा सबैभन्दा बढी खिम्तीबासी छन् । यहाँ ५३ परिवारको बसोबास जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म जम्मा ५ जनाले मात्र जग्गा खरिदका लागि भुक्तानी लिएका छन् । यसैगरी फर्पुका १६ मध्ये ८ र पुरानागाउँका ४ मध्ये ३ जनाले जग्गा किनेका छैनन् । प्राधिकरणले असुरक्षित पहिचान गरेको क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका अनुमति दिएको छैन । आफूखुसी घर बनाउनेको किस्ता रोकिएको छ ।
पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्र भूकम्पले जोखिम बनाएपछि पनि त्यस ठाउँ छोड्न तयार छैनन् । भएको जग्गाजमिन र संस्कृति सोही क्षेत्रमा रहेकाले घडेरी मात्र बाहिर खोज्दा व्यवहार नचल्ने उनीहरूको भनाइ छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकाका केही व्यक्तिले भविष्यमा सरकारसँग कुनै सहयोग या क्षतिपूर्ति नमाग्ने कबोलको कागज वडा कार्यालयमा बनाएर जोखिम क्षेत्रमै घर बनाउन र राहत पाउन माग गरेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:४१
४६ वर्षसम्म दरबन्दी थपिएन
चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या
ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रमा जानै मान्दैनन् चिकित्सक
भाद्र ६, २०७५ ज्योति कटुवाल
दैलेख — जिल्ला अस्पतालमा ५ महिनादेखि ९ औं तहका चिकित्सकको दरबन्दी खाली छ । डा. सोभित थापा दैलेखबाट सरुवा भएपछि रिक्त स्थानमा ५ महिनासम्म कसैलाई पठाइएको छैन ।
विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा सामान्य उपचारका लागि सुर्खेत र नेपालगन्ज जानुपर्ने बिरामीको बाध्यता छ । जिल्ला अस्पतालमै ३५ वर्षसम्म दरबन्दी थपिएको छैन । सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा दरबन्दी थप नभएको डा. नीरञ्जन पन्थ बताउँछन् । त्यस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लकान्द्रा र नौमुलेमा लामो समयदेखि चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या छ ।
स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको ४४ वर्षसम्म पनि चिकित्सक पुगेका थिएनन् । ४४ वर्षपछि लकान्द्रा ठाटीकाँधमा पहिलो डाक्टरका रूपमा डा. विकास शाहलाई २ वर्षअघि गएका थिए । शाह अहिले अध्ययन बिदामा छन् । अहिले स्वास्थ्य केन्द्र अहेबकै भरमा चलिरहेको छ । इन्चार्ज महेश चौधरीले विकट भएकाले कोही पनि आउन नमान्दा उपचारमा समस्या भएको बताए ।
उनका अनुसार डा. शाहले २ वर्षसम्म बिरामीको उपचार गरेपछि यहाँ स्वास्थ्य सेवा सुधारको आशा पलाएको थियो । जिल्लाको सबैभन्दा विकट क्षेत्र मानिने ठाटीकाँध गाउँपालिकामा चिकित्सक नजाँदा सर्वसाधारण उपचारका लागि सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि सडकमा मात्र ध्यान दिएकाले स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।
दुल्लु नगरपालिकामा पनि डाक्टर बस्नै मान्दैनन् । अध्ययन र गोष्ठी बहानामा चिकित्सक राजधानीमा बस्ने गरेका छन् । डा. लाल गुरुङ र डा. लीला देवकोटा राजधानीमै रहेको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ । देवकोटा अध्ययन बिदा र गुरुङ परीक्षाका लागि बिदामा छन् ।
चिकित्सक बिदामा भएकाले दुल्लु अस्पताल पनि अहेबकै भरमा चलिरहेको छ । यहाँ २ चिकित्सकको दरबन्दी छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा आएका बिरामी रिफर गर्ने काम मात्रै भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । नौमुलेका यदुनाथ बरालले डाक्टरको वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा समस्या भएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा डाक्टर नभएपछि विरामी सामान्य उपचारका लागि पनि ऋण काढेर बाहिरी जिल्ला जान बाध्य छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पन्थले २०२९ देखि २०४० सम्म पाएका दरबन्दीले नै अस्पताल सञ्चालन भएको बताए । ‘जिल्ला अस्पतालमा गाउँ–गाउँबाट उपचारका लागि आउने बिरामीको भीड छ,’ उनले भने, ‘एउटा डाक्टरले सबै बिरामीको कसरी उपचार गर्ने ?’
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ ०८:४०